Madepositi akabatana neEurostoxx 50 | Ehupfumi Zvemari
Imwe yemaitiro anowanikwa kune vashoma nevapakati varimari kuitira kuti mari yavo iite purofiti pasina kufungidzira njodzi ndeyokubatanidza yakatemwa-temu bhangi dhipoziti kune yakasarudzika indekisi yeEuropean equities, iyo Eurostoxx 35. Iyi fomati yekudyara ine mukana wekuti iwe ndichagara ndine yakavimbiswa capital vakabatsira kune ichi chigadzirwa chemari uye pamwe nemukana wekuwana kufarira kwavari. Kuve kuwanikwa mune mamwe emabhangi anoshanda munyika medu.
Iyi kirasi ye impositions inoda chinhu chekutanga chinodiwa uye izvo hazvisi zvimwe kunze kweiyo stock index kuti uwane chikamu pamutengo wayo. Mukana wekusasvika pairi, chete mashoma mashandiro anozowanikwa izvo pazasi 0,5%. Nenzira yakatarwa uye yakavimbiswa chero chii chinoitika mumisika yemari. Nenzira iyi, kuchengetedza kunovimbiswa mune isina kunaka mamiriro ekudyara.
Kune rimwe divi, iri yemhando yekuchengetedza iyo inoitirwa chimiro chakanyatso tsanangurwa chevatengesi. Iine mhando yekudzivirira yemushandisi iyo inoisa kuchengetedzwa kweguta rayo kutanga pamusoro pezvimwe zvinotyisa kufunga. Kunyangwe kana iri pamutengo wekusiya zvinokwanisika zvinowedzera muEuropean benchmark index. Nekuti hatigone kukanganwa kuti mwero wekufarira wakanyanya pane iri dhipoziti i5%.
1 Eurostoxx 50: kukwira kwemitengo
3 Mumvuri weiyi nguva yekuisa
4 Nechipo chakasiyana
Eurostoxx 50: kukwira kwemitengo
Ichi chigadzirwa chemari chinozivikanwa nekuti kondirakiti yayo hairevi chero mhando yemakomisheni uye zvimwe zvinoshandiswa mukutungamira nekuchengetedza. Ichiri kune rumwe rutivi, ine nguva yekupera iyo iri dzakakomberedza 24 uye 36 mwedzi. Yakakwira padiki pane mune echinyakare zvimiro uye uye mune zvese zviitiko kwavo kusarura kana kuzere hakubvumidzwe. Uku kudzora kwakakomba kune vano saver sezvo vachizotadza kuve nemari yavo kwenguva yakareba. Naizvozvo, hakuzovi nesarudzo kunze kwekumirira kupera kwayo. Mune imwe yemimvuri yeichi chakakosha chigadzirwa chemari.
Kune rimwe divi, zvinofanirwawo kuyeukwa kuti aya mareti emari ane akakwirisa mashoma emari yekudyara. Kutenderedza 5.000 uye 10.000 euros, tisingakwanise kuzvivandudza zvachose sezvo zviri zvigadzirwa zvisina kuenderera nekufamba kwenguva. Kuva, chero zvakadaro, chimwe chezviratidzo zveaya akakosha uye matsva ekuchengetedza mamodheru. Senzira inochengetedza yakawanda yekudyara yakananga mumisika yequity, mune ino kesi yakabatana nebhenji rekare rekondinendi, iyo Eurostoxx 50.
Kuchengetedzwa kwemari yakachengetwa ndeimwe yemapoinzi makuru ekutsigira izvi zvigadzirwa zvemabhangi. Nekuti nenzira iyi zvinokwanisika kubvisa kurasikirwa mumusika wemasheya. Nepo kune rimwe divi, zvinokwanisika kuburitsa yakakura kusiyanisa kwekudyara sezvo imwechete kana kupfuura kukosha kwemari inoshanduka isina kubvumidzwa. Kana zvisiri, pane kudaro, chiito ichi chinoitwa pane imwe yeakasimba kwazvo maindekisi emusika weEuropean. Iko makumi mashanu anomiririra emari muEurope akabatanidzwa.
Imwe yemabhenefiti ayo makuru ndeyekuti hazvidiwe kudyara yakawanda mari. Asi pane zvinopesana, zvakaringana ku zviyero zvine mwero kumhuri dzose. Uye zvakare, mune dzimwe nguva ivo vanozadzikiswa neimwe midziyo yemari kubva pamari yakatarwa uye ndizvo zvinokonzeresa kuti panogara paine kudzikiswa uye kwakavimbiswa pakupera kwekukura kwavo. Pasina makomisheni uye zvimwe zvinoshandiswa mumaneja ayo ane kutenga uye kutengeswa kwemasheya mumusika wemasheya. Kune yerudzi rwevashandisi vasina kujaira kuisa mari yavo muzvikwereti zveequity.
Mumvuri weiyi nguva yekuisa
Ichokwadi zvakare kuti haasi ese mwenje mumadhipatimendi akabatana neEurstoxx 50, asi pane zvimwe zvisina kunaka zvekutarisa mukubvumirana kwavo. Imwe yeakanyanya kukosha ndeye iyo ine chekuita nayo kurasikirwa kune zvishoma izvo zvinogona kugadzirwa mumusika uno weEuropean equity. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi hunhu uye kubva pakuona kwezvakakosha.
Nepo pane izvo zvinopesana, kune zvimwe zvigadzirwa zvehunhu izvi zvakasunganidzwa kune mamwe epasi rese mabhenji indices. Semuenzaniso, mumiriri anomiririra hupfumi hwepasirese: "Ibex-35 "," Eurostoxx-50 "," Dax "," Dow Jones "," Nasdaq Composite "," S & P " kana kuti "Nikkei". Ivo vanokwanisa kushandirwa zvichibva pane zvavanofarira vevanosima mari kana zvinoratidza izvo zvavanogamuchira kubva kunhepfenyuro yezvemari kwavachazovashandira. Zvimwe zvakagadzirwa chaizvo yemaprofiles anochengetedza, nepo vamwe vachinongedzera kune vanoisa mari vane hukasha, izvo zvinoreva imwe njodzi mukuhaya kwavo.
Izvi zvakasiyana muzvipo zvinoreva kuti sarudzo dzakachengetedzeka dzinogona kuwanikwa mumusika dzakanyorwa mumisika yepamusoro yemasheya epasi, kubva ku "zvitema-machipisi"Kubva pamari yenyika (Endesa, Iberdrola, BBVA, Santander neTerefonica) kune vamwe vasingazivikanwe kune muzvinashawo wepakati senge ChiFrench, chiGerman kana chiItaly tsika. Chero zvazvingaitika, iri kirasi yenguva dhipoziti rakavakirwa pamabhasikiti ekuchengetedzwa kunoenderana nemakambani akakosha kukosha. Iine yakanyanya kukwirira vhoriyamu yemari uye izvo zvinoita mareferenzi masosi kune vese vadiki nepakati varimi.
Zvekuti nenzira iyi, kurasikirwa kwakanyanya hakugone kugadzirwa mumapotifoliyo ekudyara kana zvirinani iwo ari mashoma. Iko iko kwazviri kuita kukuru kuri iko kwekudzikisira kwekukwanisa kuderera uko kunogona kugadzirwa mune irworwu rudzi rweyeti misika. Se poindi dzekusiyana zvine chekuita neyakajairika mabhengi emari uye pasina kana chiitiko pasi pekumanikidzwa kwemakomisheni uye zvimwe mari mukutarisira kwavo kana kugadzirisa. Zvekuti kubva ikozvino kuisa mari mumusika wemasheya kuri nyore kwazvo pane mukuita kwakananga kwekutenga nekutengesa zvikamu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Madepositi akabatana neEurostoxx 50